Breaking news:भर्खरै सरकारको यस्तो निर्णय: भोलिदेखि सार्वजनिक बस चल्न पाउने, अरु के–के खुले, यस्तो परिवर्तन ! - Nepali in Australia
Breaking news:भर्खरै सरकारको यस्तो निर्णय: भोलिदेखि सार्वजनिक बस चल्न पाउने, अरु के–के खुले, यस्तो परिवर्तन !
June 28, 2021 autherLeaveaComment on Breaking news:भर्खरै सरकारको यस्तो निर्णय: भोलिदेखि सार्वजनिक बस चल्न पाउने, अरु के–के खुले, यस्तो परिवर्तन !
अनुहार चम्काउन मानिसले निकै रकम खर्च गर्छन्। व्युटी पार्लर, चिकित्सक लगायतका धाउँदा धाउँदा पनि अनुहारमा चमक आउँदैन।तर कतिपय यस्ता सामाग्री र प्रयोगहरुलेपनि मानिसका छालामा प्रतिकुल असर पर्ने गरेका छन् । तर साइड इफेक्ट नहुने गरि घरमै पनि सौन्दर्यका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ। जसले अनुहार चमकाउन मद्दत गर्छ।
एक चम्चा मह अनुहारमा लगाउने (यसमा ४-५ थोपा कागतीको रस मिलाउन सकिन्छ) १५ मिनेटमा अनुहार पखाल्दा चमक आउँछ।दुई चम्चा बेसनमा आधा चम्चा बेसार मिलाउने। त्यसलाई १० थोपा गुलाबजल र कागतीको रसले लेदो बनाउने। सो लेदोमा काचो दूध घोलेर पातलो लेप बनाउने र अनुहारमा लगाउने। करीब २० मिनेटपछि अनुहार पखाल्ने। हप्तामा एकपटक यो तरिका अपनाउँदा अनुहारमा
चमक आउँछ। पाकेको केरा मुछेर अनुहारमा लगाउँदा चाउरीपन हटाउँछ र छालालाई कसिलो बनाउँछ। डार्कसर्कल हटाउन आँखाको वरिपरी काँचो आलुको टुक्राले हल्का मसाज गर्ने। अनुहारमा चाया पनि आएको छ भने काक्रोको रसले मसाज गर्दा चाया कम हुन्छ । काँचो दूधले अनुहार मालिस गर्दा मरेको छाला हटाउँछ। निमको पातलाई पिसेर लेदो बनाएर लगाउदा छालाको रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ। यसले डन्डिफोर हटाउन पनि मद्धत गर्छ।
काक्रोको रसमा बेसार मिलाएर अनुहारमा लगाउँदा चमक आउँछ। एभोकाडोको लेप बनाई १५ मिनेट लगाउँदा अनुहार सफा र चम्किलो बनाउँछ। अनुहारमा घिउकुमारीको रसले मालिस गर्दा अनुहारमा चमक आउँछ र चाउरीपन पनि हराउँछ। सुन्तलाको बोक्रलाई घाममा सुकाएर पिसेको धुलोमा कागतीको रस मिसाएर लेप बनाउने। यसलाई फेसवासको रुपमा प्रयोग गर्ने।
उपत्यकामा किराना पसल दिनभर खुल्ने, अरु के कति बजेसम्म खुल्ने ?
फेरी एक साताको लागि थपियो निषेधाज्ञा, थप के-के खुल्यो ? (सुचीसहित)
नेपाल र चीनका अधिकारीहरु पिपिई सेट लगाएर मितेरी पुलमा यसरी कुरा गरे
May 1, 2021 auther
Exclusive: श्रीमानसंगै प”क्राउ परिन ज्वाला संग्रौला ! SP भन्छन, ‘मु”द्धा चलाउने तयारी हुदैछ’
BREAKING – फेरि पनि ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मुल्य !
एमसीसी सांसद बाट किन पास गर्ने स्पष्ट हुनु पर्छ : पूर्व राजदूत शाह